Farmaajo oo qiray in ay siyaasadeysan tahay xayiraada tacliinta Puntland
Kiisaska Coronavirus ee guud ahaan caalamka ayaa gaari kara hal milyan, sidda ay sheegtay WHO. Riix Halkan
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka gaabsaday in uu caddeeyo mowqifkiisa Shirka Wadatashiga Puntland.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caddeeyay in xayiraada dowladiisu saartay tacliinta Puntland gaar ahaan shahaadooyinka ay siyaasadeysan tahay ayaa dalbaday wadahadal.
Xukuumada federaalka oo lagu eedeeyay in ay mugdi gelisay mustaqbalka arday badan ayaa ku adkeysatay in hadii Puntland aysan gelin Imtixaanka federaal aysan ardaydooda heli doonin shahaadooyinka.
Wallow uu dhinac maray jawaabta saxda ah, Farmaajo ayaa la su'aalay xaqiiqada ku saabsan in dowladiisu siyaasadeyneyso arrimaha waxbarashadda oo maamulada xaq u leeyihiin in maamushaan.
Talaabo u muuqan kareysa ku tagrifal awoodeed iyo mid dastuurka banaankiisa ah, hogaamiyaha dalka ayaa hoos ka xariiqay in mowqifka dowladiisu yahay in gorgortan ay kala galaan madaxda Puntland.
"Walaalkey Saciid Deni, madaxweynaha Puntland dhowr jeer ayaan casuumay oo aan Xamar ku casuumay oo aan ku iri 'walaalow hana dul marin oo bal mar nagu soo dego noo imow aan wada fariisano aan kawada hadalno guud ahaan xaaladaha dalka ka jira oo ay kamid tahay [arrinta waxbarashada]' illaa iyo haddana uma suurtoobin wuxuu ku jiraa safaro dowladahaas deriska ah ama meelo fog-fog, waxaan jeclaan lahaa in uu noo yimaado oo aan wada fariisano," ayuu u sheegay Telefishinka Universal.
Mar wax laga waydiiyey Shirweynaha Wadatashiga Puntland oo 15-ka March, 2020 ka dhacaya Garowe ayuu ka meermeertay in uu ka dhawaajiyo aragtidiisa iyo in uu jawaabta si toos ah u abaaro.
Maxamed Cabdi Maareeye, wasiirka warfaafinta Soomaaliya, oo sheegay in ay soo dhaweynayaan kulankaas ayaa rajeeyay in ay kasoo baxaan "arrimo xal u noqda kala aragti duwanaanta".
Xili ka hor-dhigay waydiin kale oo ku saabsan in hogaamiyeyaasha dalka ay madmadow geliyeen masiirka qalinleyda, Farmaajo ayaa yiri "ma ahayn in aan xiligaan ka murano maamul, waxay ahayd tayada".
Puntland oo horey ugu adkeysatay in aysan wadaxaajood ka geli karin arrimo u ogolaanayo dastuurka qabyada ah ayaa ka digtay talaabooyinka dowladda Farmaajo ee "shaqsiyaadka loogu daneynayo".
Tan iyo markii uu xafiiska yimid Farmaajo, xiriirka kala dhaxeeya maamul goboleedyadda ayaa sii xumaanayey, taasoo caqabad ku noqotay in la hirgelinayo ajandeyaasha heer Qaran ee amniga iyo doorashooyinka.
Puntland oo u digtay shirkadaha daneeya shidaalka Soomaaliya
Puntland 11.02.2020. 18:20
Xeerkaas ayaa la sheegay in lagu meelmariyey hanaan sharciga banaankiisa ah.
TOOS: Caleema-saarka Madaxwaynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni
Puntland 26.01.2019. 21:48
Wafdi uu hogaaminayo Sheekh Shariif oo ka degay Garowe
Puntland 26.01.2019. 12:06
Madaxweyne Deni oo lagu soo dhoweeyey degmada Dangoroyo
Puntland 02.11.2019. 23:00
Shirka Hogaamiyaasha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho
Soomaliya 06.02.2018. 13:24
Madaxweyne Farmaajo oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garoowe
Puntland 07.01.2018. 14:44
Farmaajo iyo Deni oo wada hadal dhinaca telefoonka ah yeeshay
Soomaliya 20.07.2019. 14:46
Madaxda Maamulada oo ka tacsiyeeyay is-miidaamintii Kismaayo
Soomaliya 13.07.2019. 18:23
Dalab ka dhan ah ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya oo la gudbiyey 02.04.2020. 14:42
WHO oo sameysay saadaalin ku saabsan tirada kiisaska Covid-19 02.04.2020. 13:20